Mmachibido njem site na Mba na mpaghara dịka UNWTO
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Mmachibido njem site na Mba na mpaghara dịka UNWTO
Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • nzukọ • News • Iwughachi • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nkwupụta Mmachi Njem sitere na Nationstù Na-ahụ Maka Njem Ọchịchị Mba Unitedwa nke United Nations (UNWTO)
UNWTO dị n'azụ oge ugbua mgbe ha wepụtara akụkọ ọhụrụ banyere Mgbochi Njem Njem site na Mba na Mpaghara taa. Onye oru nyocha UNWTO gosiputara akwukwo akwukwo eTN a mara mma nke oma.
Ihe ohuru ohuru na-egosiputa onodu nke di na June 1. ihe kariri otu onwa gara aga na tupu Delta nke COVID-19 weghachitere agha na njem nleta
"Amachibidoro njem site na mba na mpaghara na-agbanwe mgbe niile, mbipụta UNWTO nke gọọmentị na-akwado agaghị enwe ike ịchụso n'oge ya," ka Juergen Steinmetz, onye isi oche nke World Tourism Network (wtn.travel) na-ekwu.
Dị ka Kacha ọhụrụ mbipụta nke Njedebe Mmachibido site na Mba na Mpaghara Report si Nationslọ ọrụ pụrụ iche nke United Nations maka njem, dika nke June 1, 29% nke ebe nile n’uwa n’enwe oke ala ha imechi njem mba uwa.
N'ime ndị a, ihe karịrị ọkara ka emechibidoro ndị njem maka kemgbe Mee 2020 ma ọ bụ karịa, yana imirikiti ndị a bụ ndị Small Island Development States nke Asia na Pacific.
N'iji ya tụnyere, naanị ebe atọ (Albania, Costa Rica, Dominican Republic) ghere oghe maka ndị njem nleta, na-enweghị mgbochi ugbu a.
Mwepu ọgwụ mgbochi zuru ụwa ọnụ na mmụba dị ukwuu nke ihe ngwọta dijitalụ maka njem nchebe kwesịrị iduga ịrị elu na njem mba ụwa n'ime izu na ọnwa ndị na-abịa n'ihu, data kachasị ọhụrụ sitere n'aka Organizationtù Ndị Na-ahụ Maka Njem Ọchịchị Worldwa (UNWTO) na-egosi.
Otu n'ime atọ (34%) nke ebe niile dị emechiri emechi, na 36% rịọ nyocha COVID-19 na-adịghị mma mgbe ị rutere, n'ọnọdụ ụfọdụ yana ihe achọrọ iji kpọpụ iche. Data ahụ gosipụtara omume na-aga ebe a na-ewerekwu nuanced, ihe akaebe-na-ihe ize ndụ dabere na-abịaru nso na mgbochi na njem, ọkachasị n'ihi ọnọdụ mgbanwe ọrịa na ntoputa nke ụdị dị iche iche nke nje ahụ. N'ezie, 42% nke ebe niile ewebatala ihe mgbochi doro anya maka ndị ọbịa sitere na ndị nwere ụdị iche iche dị iche iche sitere na nkwụsị nke ụgbọ elu na mmechi nke oke ala na mgbochi.
Mmachibido Njem site na Mba na Mpaghara nwere ike ịdị iche ma gbanwee oge ọ bụla. Nkwupụta UNWTO nke ewepụtara bụ ihe karịrị otu ọnwa, na nnukwu mgbanwe emeelarị ma ndị njem na ndị ọkachamara na-eme njem kwesịrị ime nchọpụta ya.
Pịa ebe a iji budata akụkọ zuru ezu. (PDF)
Tụkwasị na nke a, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ebe ndị ahụ kachasị sie ike nwere ụfọdụ usoro ịgba ọgwụ mgbochi kachasị dị ala, data ahụ na-egosipụtakwa njikọ n'etiti ịgba ọgwụ mgbochi ọgwụ na ịmachi mgbochi. N'iji ya tụnyere, ebe ndị ahụ nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke ịgba ọgwụ mgbochi na ebe mba nwere ike ịrụ ọrụ ọnụ kwekọrọ n'iwu na ogbugba ndu dị ka ndị a na-arụrụ ọrụ na mpaghara Schengen nke European Union, ka mma maka inye ndị njem ohere iji nwayọ nwayọ laghachi.
Nzọụkwụ dị iche iche
Esemokwu mpaghara n'ihe metụtara mmachi njem. 70% nke ebe niile dị n'Eshia na Pacific emechiri kpamkpam, ma e jiri ya tụnyere naanị 13% na Europe, yana 20% na America, 19% na Africa, na 31% na Middle East.
Na-enyocha ugbu a chọrọ maka ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi, 17% nke ebe niile n'ụwa kpọtụrụ aha ndị njem ọgwụ mgbochi na ụkpụrụ ha. N'ọtụtụ oge, mgbochi njem na-aga n'ihu na-emetụta ndị njem zuru oke zuru oke (ndị anatala ọgwụ abụọ nke ọgwụ mgbochi akwadoro), agbanyeghị, na ndị ọzọ, a na-ebuli mgbochi niile. UNWTO na-atụ anya na nke a ga-agbanwe nke ọma na izu ndị na-abịa.
Akụkọ ahụ na-egosi na mmalite nke njem ndị mmadụ na-eme n'ụwa ga-ada ụda ma ọ bụrụhaala na ndị gọọmentị na-enye ndụmọdụ ịkpachara anya. Anọ n'ime ahịa iri kachasị na 10 na-adụ ụmụ amaala ha ọdụ maka njem na-enweghị isi na mba ọzọ (ihe anọ a mepụtara 25% nke ndị mbata mba niile na 2018)
Nkwupụta UN banyere mmachi Njem Budata n'efu (PDF)